Abafundi abangalingani enjeni: kusho ukuthini? | Izinja Zomhlaba
ULurdes Sarmiento | | Izifo
I-Las abafundi abangalingani ezinjeni zibizwa ngokuthi i-anisocoria, futhi iqukethe i-asymmetry phakathi kwabafundi bobabili, lezi zinobubanzi obuhlukile. Kwenzeka kuzo zombili izinja namakati, futhi kubonakala ngokungalingani okukhulu kosayizi. Kungenzeka ngenxa yezimbangela ezahlukahlukene, futhi kudinga ukwelashwa kwezilwane.
Kukhona izizathu ezahlukahlukene lokho kubangela ukuvela kwale nkinga. Esinye sazo ukuvuvukala esifundeni esingaphambili leso, yize futhi kungabangelwa okunye izifo ezithinta izicubu zeris. Enye imbangela engaba khona ukungakhuli ngokwanele kwe-iris, kanye nengcindezi eyengeziwe esweni, izifo, izicubu ezibomvu ezinqwabelana esweni, umdlavuza, noma imiphumela emibi yeminye imithi.
1 Izimbangela zabafundi abangalingani ezinjeni
1.1 Ukuthuthuka okunganele kwe-iris
1.2 U-Anisocoria kusuka ekuhlukumezeni
1.3 Ukuhlukumezeka okuphindaphindiwe emehlweni
1.4 Xhumana nemikhiqizo yezitshalo, amakhemikhali noma izidakamizwa
2 Umfundi ogcwele ngeso elilodwa
3 Ngabe abafundi abahlanjululwayo basho ukuthini ezinjeni?
4 Inja yami isivule abafundi futhi iyaqhaqhazela
4.2 I-trastorn yengqondo
4.3 Ukuphazamiseka kokucindezela okubonakalayo
5 Ukuhlolwa okwenziwa udokotela wezilwane enja enabafundi abahluziwe
Izimbangela zabafundi abangalingani ezinjeni
Ukuthuthuka okunganele kwe-iris
Enye imbangela engenzeka ingukuthi ukuthuthuka okunganele kwe-iriskanye nengcindezi eyandayo esweni, izifo, izicubu ezibomvu ezakheka esweni, umdlavuza, noma imiphumela emibi yeminye imithi.
U-Anisocoria kusuka ekuhlukumezeni
Ukushaya ngamandla ekhanda lenja kungaholela kubafundi abangalingani. Mhlawumbe ukuhlukumezeka kuthinte izinzwa ezixhuma amehlo nobuchopho.
Uma zingekho ezinye izimpawu ku-canine ezethusayo, kungakuhle ukuthi ulinde amahora angama-24 ukuze ijwayeleke futhi uma kungenjalo, kufanele umyise kudokotela wezifo zamehlo wezilwane.
Ukuhlukumezeka okuphindaphindiwe emehlweni
Ngenxa yokuthi inja iklwebhile futhi ihlikihla ngokungaphezi kuleyo ndawo, ingadala i-anisocoria. Ungazama ukuthuthukisa isimo ngokubeka ikhola ka-Elizabethan kusoUma usayizi wabafundi ungathuthuki cishe ezinsukwini ezimbili, sekuyisikhathi sokubiza uchwepheshe.
Xhumana nemikhiqizo yezitshalo, amakhemikhali noma izidakamizwa
Kuphela ezimweni lapho ukuvezwa kwelinye lamehlo kunoma iyiphi yalezi zinto, kungadala ngqo ukungalingani kwabafundi. Kulezi zimo, kuyadingeka ukuthi ugeze kahle ngesisombululo se-saline oyinyumba, ukuqinisekisa ukuthi noma yiziphi izinhlayiya ziyaphuma noma ziyoncibilika noketshezi.
Ukuthola ukuxilongwa okulungile, kudingekile ukuthi udokotela wezilwane ahlolisise kahle inja, ahlaziye izimbangela ezingaba khona zezinzwa nezamehlo ezibhekene ne-anisocoria. Ubuchwepheshe be-Ultrasound buvame ukusetshenziselwa lokhu., okwazi ukuthola izilonda esweni.
I-computed tomography imaging ye-magnetic resonance, ngokwengxenye yabo, ilusizo kakhulu ukuthola izilonda zobuchopho, zona ezingadala le nkinga.
Ukwelashwa kwakho kuncike kulokho kutholakala. Ngokuya ngesizathu, kuzonikezwa umuthi owodwa noma omunye, okuthi ingahluka kakhulu kuye ngokuthi inkinga iso noma ubuchopho.
Lokhu kufanele kunqunywe uchwepheshe; Ungalokothi uzenzele imithi isilwane uqobo, ngoba singadala izinkinga ezinkulu zempilo. Ngokufanayo ukwelashwa kufanele kusetshenziswe ngokuqinile njengoba kushiwo ngudokotela, ngaphandle kweziphazamiso bese uqedela ukuze imiphumela ibe ngeyesikhathi esifanele nangesikhathi esifushane kakhulu.
Ayikho indlela yokuvimbela lo mehluko phakathi kosayizi wabafundi, ngenxa yezinhlobonhlobo zezinto ezibangela lokho. Noma kunjalo, kulula ukuhlola inja yethu amehlo kaningi, ngoba zibonisa izimpawu zezifo ezahlukahlukene. Ngaphambi kokuvela kwanoma iyiphi yazo, kufanele siye kudokotela wezilwane ngokushesha okukhulu.
Esingakwenza ukugwema izimo eziyingozi esilwaneni, lapho singawela khona noma ukushaya ikhanda noma ukulimaza amehloKubalulekile futhi ukuthi ube nomphakathi omuhle ngaphambi kwesikhathi ukuze ungalwi nezinye izilwane ezifuywayo futhi ubangele ukulimala okuveza, phakathi kwezinye izinto, i-anisocoria.
Indawo lapho kugcinwa khona inja kumele iphephe ngangokunokwenzeka. gcina izinto ezibukhali noma ezisindayo kude engawela phezu kwayo, amakhemikhali nangaphandle, ukhula, izinti namagatsha kungenza umonakalo omkhulu.
Njengoba sishilo ngaphambili, izimbangela ze-anisocoria zingaba ngemvelaphi yezinzwa kanye nemvelaphi ye-ocular.
Ukuzinquma, ukubuyekeza ngokuphelele udokotela wezilwane kuyadingeka, ngokusebenzisa izivivinyo ezikhethekile njenge-ultrasound, i-CT scan, noma i-MRI.
Umfundi ogcwele ngeso elilodwa
Akujwayelekile ukuthi abafundi bezinja bavuleke, kakhulu uma kungukuthi awuyedwaUma lokhu kwenzeka, kungenzeka ukuthi isilwane kungenzeka ukuthi sihlukumezeke noma sibe nezinkinga zamehlo futhi kwezinye izimo ngenxa yezinkinga ezingokwengqondo.
Futhi kusho ukutholakala kokulimala okuthile kobuchopho isibikezelo sakhe esibucayi, kepha udokotela wezilwane kuphela onamandla okuthola izimbangela ezingaba khona futhi asebenzise ukwelashwa okufanele.
Ezinye izizathu ze-anischornia noma ukwehliswa komfundi oyedwa, kulimaza umgogodla wesibeletho. Ukushaywa okunamandla kakhulu okuwa, ukuhlaselwa noma ngenxa yokuqhutshwa yizimbangela eziyinhloko zalesi sifo esilwaneni.
Ngabe abafundi abahlanjululwayo basho ukuthini ezinjeni?
Masiqale sibeke umfundi ngaphakathi kweso, kusukela yilelo phuzu elincane elikhona maphakathi neso nangaphakathi kwe-iris. Ulwelwesi lwemisipha ukunwebeka kwalo okuluvumela ukuthi luthinte futhi lukhulise, ekuphenduleni amandla okukhanya.
Enjeni, umfundi mkhulu, awunikeze umkhakha obanzi wombono. Lokhu kuvame ukukhuliswa ngezizathu ezahlukahlukene, kufaka phakathi:
Kwezinye izimo ezingokomzwelo.
Lapho kunesidingo sokuthwebula ukukhanya okuningi.
Kuze kube sesikhathini sokufa.
I-Mydriasis noma abafundi abahlanjululwe kungaba iso elilodwa, noma kuzo zombili. Lapho abafundi besayizi efanayo babhekwa njengokujwayelekile, bazonwetshelwa yisikhuthazo sokukhanya.
Inja yami isivule abafundi futhi iyaqhaqhazela
Lezi yizimbangela ezingenzeka, kungani inja yakho ivule abafundi futhi yathuthumela:
Inja edakiwe Une-hypersalivation, ukuquleka, ukuthuthumela, kanye ne-mydriasis. Futhi ubukeka edidekile, ehlanza, futhi ecindezelekile. Zonke izizathu zokumyisa esimeni esiphuthumayo sezilwane.
Ngezikhathi lapho isilwane sicindezelekile, lezi zimpawu ezimbili zisobala. Isibonelo i-phobia of fireworks. Kulezi zimpawu ezimbili kunezelwa ukuchama okungalawuleki, ukuhefuzela, ukukhushulwa ngokweqile nezinye. Zingaxazululwa ngokuqeqeshwa kochwepheshe.
Ukuphazamiseka kokucindezela okubonakalayo
Lokhu kuqukethe ukuphindwaphindwa kokuziphatha okuthile esilwaneni, okungaphenduli ezintweni ezithile noma ezimeni ezithile. Uphawu olwenzeka kulezi zimo yi-mydriasis.
Ukuhlolwa okwenziwa udokotela wezilwane enja enabafundi abahluziwe
Enye indlela yokubamba inja futhi ukwazi ukubona abafundi ukuyibeka etafuleni. Kulokhu, kufanele ume ngakolunye uhlangothi lwethebula futhi maqondana neso umuntu azobheka kulo.
Beka ingalo yakho yangakwesokudla emahlombe enja. Sebenzisa isandla sakho sobunxele ukusunduza ngokuqinile isifonyo senja usibhekise etafuleni bese wehlisa ijwabu leso elingezansi phansi. Sebenzisa isandla sakho sokudla ukubamba isiqukathi semithi.
Uma inja izama ukusukuma, ncika umzimba wayo ongaphezulu emahlombe ayo ukuvimbela ukuthi ivuke, bese uzama ukuyibeka ngohlangothi lwayo. Sebenzisa ingalo yakho yangakwesokudla nomzimba ongaphezulu ukugcina inja ilele ngohlangothi.
Sebenzisa isandla sakho sobunxele ukugcina ikhanda lakho etafuleni bese wehlisa ijwabu leso elingezansi phansi. Le nqubo kulula ukuyenza uma unomuntu ozokusiza. Ukuhlola amehlo, ikhanda lifakwa phakathi kwezandla zombili ngesithupha esisodwa kwijwabu leso eliphezulu nesinye isithupha esigqokweni esiphansi.
Ukubona izingxenye zeso ngezansi kwejwabu leso eliphezulu, phakamisa ijwabu leso phezulu ngesithupha sakho, esizovula iso kakhulu. Ingxenye emhlophe yeso yi-sclera. I-sclera ivamise ukuba mhlophe ngombala futhi inemithambo yegazi ebomvu emincane, emincane ebusweni bayo.
Ukutholwa okungavamile ku-iris kufaka:
Imiphetho engajwayelekile, yize lokhu kungenzeka ngokuguga futhi ibizwa nge-iris atrophy.
Amabala amnyama ku-iris.
Amabala egazi ku-iris.
Abafundi bezinja bayindilinga uma kuqhathaniswa nabafundi bamakati ayizimbumbulu. Abafundi kufanele babe ngosayizi ofanayo futhi kufanele bangene esinqeni ngqo lapho ukukhanya okukhanyayo kukhanya esweni.
Uma udonsa ijwabu leso elingezansi, ungabona futhi ijwabu leso lesithathu, ebizwa nangokuthi ulwelwesi olucabangayo, ezophuma ekhoneni elingaphansi langaphakathi leso.
Ijwabu leso lesithathu alinamuki kalula esweni lenja njengasekhathini. Ijwabu leso lesithathu livamise ukuba nombala opinki noma omhlophe ngombala futhi linemithambo yegazi emincane ebusweni balo. Ijwabu leso lesithathu ngokuvamile alibonakali.
Imithi yamehlo ingaba ngamaconsi noma amafutha okugcoba. Amafutha ahlala esweni isikhathi eside kunamaconsi, ngakho-ke ngokuvamile asetshenziswa kaningi. Udokotela wezilwane wakho uzokunikeza imithi ethile yalolu hlobo lwenkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izifo » Abafundi abangalingani enjeni: kusho ukuthini?
Sawubona, qaphela ukuthi inja yami inomfundi okhuluphele kakhulu kunenye, kungenzeka ukuthi ikati liyiklwebhile?
Singazi kanjani ukuthi iPitbull yethu ihlanzekile?